Masks Face, Diski Masị, N95, Ihe ana-ahụfu, Uwe PPE - Tianli
Quanzhou Tianli Nchedo Nrụpụta Ihe Nmepụta Co., Ltd (SSP) hiwere na afọ 2010, dị na Quanzhou City, Fengze nke bara nnukwu ọgaranya na ntutu isi .Quanzhou Tianli Nchebe Nmepụta Ihe Nzuzo na Co., Ltd. (SSP) hiwere na afọ nke 2010, dị na Quanzhou City, Fengze nke bara nnukwu ọgaranya na ntutu isi. Companylọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na imepụta ngwaahịa iku ume nke ọkachamara.
150m Wet Polishing Pads Abrasive Ngwaọrụ
4 inch ihe eji eme ihe eji eme ka diamond polishing pad
Plastic PDR okwute mmiri nwere ike imeghari ihe ndi mmadu nke…
PM2.5 nyere ikike
Ihe bụ isi bụ ụdị dị iche iche nke PPE masks na mgbochi Pm2.5 masks, dị ka iko a kpụrụ akpụ dị elu masks, pọpụ elu filtration masks na ọtụtụ usoro ndị ọzọ na ụdị dị iche iche.
Igwe mgbochi Pm2.5
kpuchiri ekpuchi ụdị ihe eji eme ihe
Anyị ga-ahụ na ị na-eji nke a
Akwụkwọ ikike kachasị sie ike.
Ndị ọrụ aka ọrụ
Ọkachamara na omume
E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 2008.
Ndị na-enye ha
Ọ bụ naanị onye na-eweta ngwaahịa ọhụrụ nke PM2.5 respirator na China.
Nkpuchi N95 Mgbu
Plastik PDR plastik ngwaọrụ mmiri polishing pad polishing ngwaọrụ maka ire
N95 Nkpuchi Washable
Quanzhou Tianli Nchebe Nrụpụta Ihe Nmepụta Co., Ltd (SSP) hiwere na afọ 2010, dị na Quanzhou City, Fengze nke bara nnukwu ụba na ntutu isi. Companylọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na imepụta ngwaahịa iku ume nke ọkachamara.
Ndi okacha amara mara ihe nkpuchi a nke MASKin mara amara ma nweta ezigbo aha, na-ewulite onyinye di elu n’uche ndi otu oru na ndi ahia. SSP na-agbagha mgbe niile na nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ nke ịnọgide na-eme ka ihe ka mma, ikepụta uru.
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ anyị na-emepụta ngwaahịa mbụ nke ụwa na-agbaso ụkpụrụ nke ịdị mma na mbụ. Ngwaahịa anyị enwetawo aha dị mma na ụlọ ọrụ yana oke ahịa n'etiti ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ..
nke ohuru ozi & blọọgụ
site na nchịkwaMar-31-2020